Iindaba zesiXhosa, eyeTshazimpunzi 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, eyeTshazimpunzi 2019
Written by Ashia Nkontsa on 10/04/2019
Kubonakala ngathi ugwayimbo lwase-Happy Valley luthomalele
Kwezakutshanje kugwayimbo obelubanjwe ngabahlali baseHappy Valley, sele kukho ucwangco kwakhona kulammandla nangona iindlea zisavalwe ngamatayala avuthayo. Kukholeleka ekubeni olugwayimbo lolokuhanjiswa kweenkonzo ezingundoqo ukanti abakhweli abaphuma eKhayelitsha naseMitchells Plain ngabona bachaphazelekileyo kolugwayimbo nanjengoko iibhasi kwakunye nezinye izithuthi zingakwazi ukuhamba nkqu nokuphuma kwiidepho.
Asezokunqongophela amanzi kweli leKapa
Ikhona inkxalabo yokuba kungakho ukunqongophala kwamanzi kweliphondo lentshona koloni nangona kukho iimvula ezizayo kodwa azanelanga ekonyuseni umthamo wamanzi. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshiweyo nangona zikho iimvula ezilindelekileyo kodwa umthamo wamanzi emadamini uthe gqolo ukwehla nanjengoko amadama akhuphela kwiphondo lentshona koloni ehleli kumyinge wamashumi mathathu anesithandathu eepesenti ngelixa athumela kwisixeko sekapa ehleli kumashumi amane anesibhozo nesiqingatha ekhulwini.
U-Ramaphosa umile kwelokulungisa izithuthi kweloMzansi Afrika
Umongameli weli lomzantsi afrika Cyril Ramaphosa uthembise abemi beli lomzantsi afrika ukuba urhulumente uzakusebenza ngandlela zonke ukuzama ukulungisa ezothutho kweli. Uthi ukuzakuthi ga ngoku sele ukhona umcebo osele ukhona wokuphucula oololiwe ukuqinisekisa ukuba azigcwali ngaphaya komlinganiselo yaye sikhuselekile. LokaRamaphosa ebethetha ngethuba kuphehlelelwa ngokusesikweni oololiwe abatsha kwisikhululo saseKapa izolo. Kwangaxeshanye kwelinye icala Imanyano yecandelo lezothutho kuzwelonke i-United National Transport Union ithi ifuna ukuba umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa ayibhengeze njengomba ongxamisekileyo imeko egqubayo sithetha nje kwi-arhente yabakhweli bakaloliwe u-PRASA, ukuze kutyalwe amajoni azakukhusela iindawo zokulindela oololiwe kwakunye neziseko zophuhliso. Lemanyano ithi ikholelwa kwelokuba u-PRASA uphantsi koxinezelelo lwezaphuli-mthetho kwakunye nabakhweli abalugcwabevu ngumsindo ngenxa yento echazwe yilemanyano njengokufeda kwale-arhente ukubonelela ngenkonzo yabakhweli ekhuselekileyo nethembekileyo. Osisithethi salemanyano unkosikazi-Sonja Carstens uthi udibene nomongameli u-Ramaphosa ngethuba etyelele isikhululo soololiwe e-Kapa izolo, kumcimbi wokutyhilwa komnye woololiwe abatsha balamaxesha.Unkskz-Carstens uthi uxelele umongameli u-Ramaphosa ukuba lemanyano imbhalele iincwadi eziliqela angakhange aziphendule. Uthi ileta yokugqibela yathunyelwa kwi-ofisi kamongameli ngomhla wamashumi mabini anethoba kweyomqungu, nalapho lemanyano yayimbongoza ukuba angenelele ukuhlangula U-PRASA.